कोरोनाका दुवै मात्रा खोप प्रभावकारी - WorldWide Khabar
कोरोना भाइरसविरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएकामा खोपको प्रभाव बढिरहेको पाइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण भएका सहभागीमध्ये लक्षण नदेखिएका सहभागीको अनुपातमा जटिल लक्षण देखिएका व्यक्तिमा एन्टिबडी विकसित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
परिषद्का सदस्य–सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोरोना सङ्क्रमण भई निको भएका तथा खोप लगाएका अधिकांश जनसङ्ख्यामा कोरोनाविरुद्धको एन्टिबडी विकसित भएको अनुसन्धानबाट देखिएको जानकारी दिए । कोरोना भाइरसविरुद्ध कोभिसिल्ड खोप लगाएका व्यक्तिमा ६३.३ प्रतिशत र भेरोसेल लगाएकामा ७२.४ प्रतिशतमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एन्टिबडी बनेको बताए ।
सदस्य–सचिव डा. ज्ञवालीले चौथो महिनामा एन्टिबडी क्रमशः घटेर ४३.७५ प्रतिशत मात्रा एन्टिबडी देखिएको बताए । उनले अनुसन्धानकै क्रममा दीर्घरोगीमध्ये एउटै मात्र दीर्घरोगी भएका ७८.९, दुईवटा दीर्घरोगी भएकामा ७१.६९ र तीनवटा दीर्घरोगी भएकामध्ये ४२.३ प्रतिशत एन्टिबडी देखिएको छ ।
उक्त अध्ययनमा एक हजार २२७ पुरुष र ५७९ महिला सहभागी थिए । औसत उमेर ५०.५ प्रतिशतका व्यक्तिमा गरिएको अध्ययनमा १५.४ प्रतिशत सहभागीमा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
Previous articleहराउँदै लिङ्गे पिङ संस्कृति
Next articleसोमबार खुल्दै इजरायलको चिट्ठा